Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Nyamavhuvhu 13, 2018
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanotaura pazuva rekucherechedza mabasa akaitwa nemagamba akafira rusununguko rwenyika vachiti nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo, yoenderera mberi nekuvandudza hupfumi hwenyika.
MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inoti haina kuenda kunobatana neZanu PF nekuti hurongwa hwe Heroes Day hausi hwenyika asi kuti ndehweZanu PF uko inoshandisa mukana uyu kunyomba vanopikisa, ichiti iyo yaita hurongwa hwayo hwekutora zuva ranhasi sezuva rekurangarira magamba ayo akaita sevachakabvu VaMorgan Tsvangirai, Amai Susana Tsvangirai, VaItai Dzamara nevamwe vakaurayiwa nyika yawana kuzvitonga nekuti vaipikisa matongero eZanu PF.
Magweta ari kumirira mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, munyaya yaVaNelson Chamisa veMDC Alliance yekupikisa kudomwa kwaVaMnangagwa neZimbabwe Electoral Commission semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, anoenda kudare reConstitutional Court uko anoriwana rakavharwa sezvo nhasi riri zuva rezororo.
Madzimai nevana vevanhu vakaitwa magamba ematunhu kuMashonaland West vochema nerekuti hurumende iri kuvabata nekuseri kweruoko.
Mitambo yenhabvu yotsviriridza, FC Platinum ichitungamira, asi yakasonwawo neNgezi Platinum Stars
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva zuva remagamba, kana kuti Heroes Day.